नुवाकोटमा मतगणना हुँदै, कुखुरा फाम जस्ताे छ मतगणा स्थल -बिगुल न्यूज
नुवाकोटमा मतगणना हुँदै, कुखुरा फाम जस्ताे छ मतगणा स्थल
नुवाकोट । नुवाकोट मतगणनाको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको छ । मतगणनाको लागि सम्पुर्ण तयारीपुरा भएको र तीन दिनभित्र अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरिने दुवै जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यलय नुवाकोटले केहि वेरमा नै मतगणना शुरु हुने जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि २ वटा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाका लागि ४ क्षेत्र रहेको नुवाकोटमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा क्षेत्र नं. २ र त्यस अन्र्तगतका प्रदेश सभा र शहकारी डिभिजन कार्यालयको भवनमा क्षेत्र नं. १ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र त्यस अन्र्तगतका प्रदेश तहको मतगण्ना हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यलय नुवाकोटले दिएको छ ।
दुई वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तीन÷तीन वटा समूहलाई मतगणनाका लागि परिचालन गरिने उनले वताए । तारजाली लगाउनुका साथै सिसिटिभी क्यामेरा राखिएको मतगणनास्थलमा पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा मतगणना गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सुचना अधिकारी यज्ञ पुरीले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा मंसिर १० गते सकिएको नुवाकोटको निर्वाचनको मतगणना तत्काल गणना नभएपछि दुई सातासम्म मतदाता, दलका कार्यकर्ता र उम्मेदवारलाई धैर्य गर्न गाह्रो भएको थियो । मतपेटिकालाई १० दिनसम्म सुरक्षित राख्न जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय र जिल्ला निवार्चन कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको लागि दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको नुवाकोटमा दुवै
क्षेत्रको मतपेटीका फरक फरक स्थानमा राखिएको छ । क्षेत्र १ को मतपेटिका सदरमुकाम विदुरस्थित डिभिजन सहकारी कार्यालयमा र क्षेत्र २ को कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा राखिएका छन् ।
प्रकाशित : बिहिबार, मङि्सर २१, २०७४१९:०२
बाँकेमा ६० प्रतिशत मतदान
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा धरौटी व्यवस्था हट्यो, अब यस्तो बन्छ निर्वाचक मण्डल
भरतपुर महानगरको चुनाबी प्रतिस्पर्धा झनै रोमान्चक : ह्वात्तै बढ्यो देबी र रेणुको अन्तर
सरकार र निजी क्षेत्र मिलेमात्र देशको विकास सम्भव’: राणा
काँग्रेसका उम्मेदवार अम्बरबहादुर खड्का निर्विरोध
अख्तियारले शर्मा बिरुद्द आज मुद्दा दायर गर्दै
घरमै दूध लिन आउन थालेपछि किसान खुशी